Midowga Yurub oo cunaqabatayn ku soo rogay madaxweynaha Syria & madax kale – SBC
Midowga Yurub oo cunaqabatayn ku soo rogay madaxweynaha Syria & madax kale
Brussels:-Wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo shir kulahaa xarunta midowga Yurub ee Brussels ayaa meel mariyey qaraar cunaqabatayn toos ah lagu saarayo madaxweynaha dalka Syria iyo mas’uuliyiin sar sare oo jagooyin muhiim ah ka haya dowladda Syria kuwaasi oo uu midowga Yurub ku tilmaamtay in ay qeyb ka yihiin caburinta dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeedo nidaamka Bashaar Al-asad.
Cunaqabtaynta la saaray madaxweyne Bashaar Al-asad ayaa waxaa ka mid ah in dal kamid ah 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub uusan wax Visa-ah ama dal kugal uusan siin Karin madaxweyne Asad iyo Mas’uuliyiinta kale ee uu midowga yurub cunaqabtaynta ku soo rogay .
Bayaan ka soo baxay xafiiska midowga Yurub ayaa lagu sheegay in maanta lagu soo daabici doono jariidada rasmiga ah ee midowga Yurub magacyada mas’uuliyiinta Syria ee uu midowga yurub cunaqabataynta ku soo rogay .
Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain William Heeg oo ka hadlayey shirka wasiiradda arrima dibadeedka Yurub ayaa sheegay in qaraarkan uu kadhigan yahay dadaal cadaadis lagu saarayo xukuumadda Syria si ay u joojiso dhibaataynta shacabkeeda.
Ma aha markii ugu horeesay ee uu midowga Yurub cunaqabatyn ku soo rogo mas’uuliyiin katirsan maamulka dalka Syria.
Laba toddobaad ka hor midowga Yurub ayaa cunaqabtayn ku soo rogay 13 qof oo uu kujiro madaxweyne kuxigeenka dalka Syria faaruuq Sharac iyo Maahir Al-asad oo ay walaalo yihiin madaxweyne Bashaar Al-asad iyo mas’uuliyiin kale.